यर्मिया 17 ERV-NE - हृदयमा - Bible Gateway
हृदयमा लेखिएको दोष
17 “यहूदाका मानिसहरूका पापहरू
तिनीहरूका हृदयको पाटीमा
अनि तिनीहरूका वेदीको सींगहरूमा
तिखो फलामले लेखिएको थियो।
2 तिनीहरूका नानीहरूले
झूटा देवताहरूका बेदीहरू सम्झन्छन्।
तिनीहरूले काठको स्तम्भहरू सम्झन्छन्
जुन अशिराहलाई समर्पित् गरेको थियो।
तिनीहरूले यी कुराहरू हरियो रूखहरू मुनी
अनि पहाडहरूमाथि सम्झन्छन्।
3 म मेरो पहाड,
अनि मूल्यवान वस्तुहरू
लूटेको समान झैं अरूलाई दिनेछु।
तिमीहरूले तिमीहरूको सम्पूर्ण देशमा
पापको दाम स्वरूप म ती चीजहरू दिनेछु।
4 तिमीहरूले मैले दिएको भूमि उम्काउनेछौ।
विदेशमा तिमीहरूले शत्रुहरूको सेवा गर्नेछौ
कारण तिमीहरूले मेरो क्रोधलाई तातो आगो झैं बनायौ
जुन सदा सर्वदाका निम्ति बलिरहनेछ।”
मानिसहरूमा आस्था, अनि परमप्रभुमा आस्था
5 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो,
“जुन मानिसले अरू मानिसमाथि भरोसा गर्छ,
अनि शारीरिक शक्तिमाथि विश्वास गर्छ,
र परमप्रभुबाट आफ्नो हृदय टाढो लैजान्छ त्यसलाई धिक्कार।
6 ती मानिसहरू मरुभूमिमा उम्रने पोथ्रा झैं हुनेछन्
अनि उन्नति तिनीहरूले देख्ने छैनन्।
तिनीहरूले असल देख्दैनन्
जब यो आउँछ।
7 त्यो मानिस धन्य हो,
जसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्छ,
जसले उहाँमाथि विश्वास राख्छ।
8 त्यो मानिस पानीको छेवमा रोपिएको रूख जस्तै हुनेछ
जसले खोल्सा सम्म आफ्नो जराहरू फैलाएको हुन्छ।
यसकारण त्यो वृक्ष गरम कालमा डराउँदैन।
यसका पातहरू खडेरी पर्दा पनि
अनि यसमा फल फल्नु छोड्दैन।
9 “मानिसको हृदय अन्य कुनै चीज भन्दा कपटपूर्ण हुन्छ।
त्यो कहिल्यै निको नहुने हुन्छ।
यसलाई कसैले बुझ्न सक्तैन।
10 तर म हुँ,
म एकजना मानिसको हृदय देख्न र निर्णय लिनु
अनि उसको कर्म र योग्यता अनुसार फल दिन्छु।
11 एकजना मानिस जसले आफ्नो अधिकार बाहिरबाट सम्पत्ति पाउँछ,
त्यो अण्डा नपारी चिङना काडने चरा जस्तै हो।
उसले आफ्नो सम्पत्ति जीवनको आधा अथवा अन्तिममा हराउँछ
अनि ऊ मूर्ख बनिन्छ।”
12 आदिदेखि हाम्रो मन्दिर
परमप्रभुको लागि महिमामय सिंहासन भएको हो।
यो एकदमै मुख्य पवित्र स्थान हो।
13 हे परमप्रभु! तपाईं इस्राएलको आशा हुनुहुन्छ,
तिनीहरू सब जसले छोड्छन्,
पछि तिनीहरू लज्जित हुनेछन्।
भूमिमा जसले तपाईंलाई छोड्नेछन्।
तिनीहरूको नाउँ माटोमा लेखिनेछ[a]।
किनभने तिनीहरूले परमप्रभुलाई,
जीवित जलश्रोतलाई त्यागे।
यर्मियाको तेस्रो गुनासो
14 हे परमप्रभु, यदि तपाईंले मलाई निको पार्नुभयो भने,
म साँच्चि नै निको हुनेछु यदि तपाईंले मलाई बचाउँनु भयो भने,
म साँच्चि नै बाँच्ने छु।
परमेश्वर, म तपाईंको गुण गाउँछु।
15 तिनीहरूले मलाई सोच्छन्,
“परमप्रभुबाट आएको वचन कहाँ छ?
16 परमप्रभु, म तपाईंको गोठालो बनिनुबाट भागेर गईनँ।
मैले शोकपूर्ण दिनको कहिल्यै इच्छा गरिन।
तपाईंको अघि मैले के भनेको थिएँ यो तपाईंको सामु छ।
17 मलाई डर नदेखाउनु होस्।
तपाईं मेरो विपत्तिको दिनमा शरण स्थान हुनुहुन्छ।
18 मलाई खेदनेहरूलाई लाज होस्,
तर मलाई लज्जित नपार्नुहोस्।
तिनीहरूलाई डर देखाउनु होस्
तिनीहरूमाथि ध्वंसको दिन आवोस्।
तिनीहरूलाई ध्वंस पार्नु होस्।
तिनीहरूलाई फेरि ध्वंस पनि पार्नु होस्।
विश्राम दिनलाई पवित्र राखी रहनु
19 परमप्रभुले यी कुराहरू मलाई भन्नुभयो “यर्मिया, प्रवेशद्वारमा जाऊ जहाँबाट यहूदाका राजाहरू भित्र जान्छन् अनि बाहिर आउँछन् त्यहाँ खडा़ भई बस्। त्यसपछि यरूशलेमको अन्य प्रवेश द्वारहरूमा जाऊ।”
20 मानिसहरूलाई यी वचनहरू भन, “परमप्रभुका वचनहरूमा कान थाप। हे यहूदाका राजा अनि यहूदाका मानिसहरू, अनि यरूशलेमका बासिन्दाहरू। प्रत्येक मानिस जो यो फाटकबाट पस्छन् मेरो कुरा सुन। 21 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ ‘तिमीहरूका जीवनका निम्ति विश्राम दिनमा कुनै भारी नबोक। यरूशलेमको प्रवेशद्वार भएर विश्राम दिनमा भारी नल्याऊ। 22 विश्राम दिन आफ्ना घरबाट कुनै भारी ननिकाल। त्यसदिन कुनै काम नगर। तिमीहरूले त्यो दिन पवित्र राख्नेछौ जस्तो मैले तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरूलाई आदेश दिएको थिएँ। 23 तर तिम्रा पिता-पुर्खाहरूले आज्ञा पालन गरेनन्। तिनीहरूले ममा कुनै ध्यान दिएनन्। तिम्रा पिता-पुर्खाहरू अत्यन्त हठी थिए। कुनै संशोधन तिनीहरू सुन्दैनथे अथवा ग्रहण गर्दैनथे।’” 24 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “‘तर यदि तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेर विश्रामको दिन शहरका मूल-द्वारहरूबाट कुनै भारी भित्र ल्याएनौ र विश्राम दिनलाई पवित्र मानी कुनै पनि काम गरेनौ भने।
25 “‘यदि तिमीले मेरो आदेश पालन गर्यौ भने, तब राजाहरू अनि राजकुमारहरू जो दाऊदका सिंहासनमा बस्छन् यरूशलेमको प्रवेशद्वारबाट आउँनेछन्। ती राजाहरू रथहरू र घोडाहरूमाथि चढेर आउँनेछन्। यहूदाका मानिसहरू र यरूशलेमका बासिन्दाहरूका नायकहरू ती राजाहरूसित आउँनेछन्। सदा-सर्वदा यरूशलेमले यस प्रवेशद्वारमा मानिसहरूलाई स्वागत गर्नेछन्। 26 यहूदाका शहरहरूबाट मानिसहरू यरूशलेम आउनेछन्। यरूशलेम वरिपरिका स-साना गाऊँहरूबाट मानिसहरू यरूशलेम आउनेछन्। मानिसहरू बिन्यामीन परिवारहरूको जमीनबाट राफेलको पहाडीदेशबाट अनि नेगेबबाट आउनेछन्। ती मानिसहरूले होमबलि, मेलबलि, अन्नबलि, धूप र धन्यवादको बलिहरू परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याउनेछन्।
27 “‘तर यदि तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ भने; यदि तिमीहरूले विश्रामको दिनमा यरूशलेमभित्र भारीहरू ल्यायौ भने, तिमीहरूले यस दिनलाई पवित्र दिन मानेका हुँदैनौ। यसकारण म आगो सल्काउनु शुरू गर्नेछु जुन निभाउन सकिन्दैन। त्यो आगो यरूशलेमको प्रवेशद्वारहरू देखि शुरू हुनेछ, अनि यरूशलेमको राजमहलहरू जलाउनेछ।’”
17:13 नाउँ माटोमा लेखिनेछ यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि “एक मानिस चाँडै मर्नेवाला छ।” जसको नाउँ सूचिमा लेखिएको छ। अथवा बालुवामा लेखिएको नाम मेटिए झैं त्यस मानिसको जीवन छिट्टै शेष हुनेछ।